PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-08-26 - EZENKOLO:
UQOPHE umlando owebandla ist Johns Apostolic Faith Mission elaziwa ngebandla lasechibini elasungulwa ngu-archbishop Petros Masango ongasekho, ngesikhathi esungula elakhe ibandla elizosabalala izwekazi lase-africa laziwe ngele-father Madwe St John Apostolic Faith Mission Church of Africa.
Leli bandla lisungulwe nguArchbishop Mboniseni Mdima nowakwakhe, umbhishobhikazi Patricia Mdima, lethulwa ngokusemthethweni endwedwe epulazini ngomgqibelo lapho ababhishobhi, abameli, nazo zonke izinhlaka eziphathelene nezenkolo bezibuthene zizokwethula leli bandla futhi zibuye zigcobe umbhishobhi ekubeni ngumbhishobhi omkhulu nomsunguli, umdima.
Usolwazi Thembinkosi Masuku we-trust In God Christian Ministries empangeni nguye obehola lo msebenzi onikezele ngezitifiketi zonke, esivela kuhulumeni sokuthi leli bandla lisemthethweni, kube esivela enhlanganweni yamabandla azimele nesiqinisekisa ukuthi leli yibandla elisungulwe nguye u-archbishop Mdima.
Uthe wonke umuntu unesikhundla unkulunkulu ambeke kuso, ngalokho ulindele ukuba abantu bamdumise bakhonze yena yedwa.
Uqhubeke wathi umsebenzi kambhishobhi omkhulu umdima ukuba asabalalise ivangeli umhlaba wonke, abantu bakhonze unkulunkulu kunokukhonza usathane.
Kuqale ngokuba umbhishobhi Kamuhelo Mapena aphakamise igama likambhishobhi Mdima ukuba abe ngu-archbishop, lasekelwa ngumfundisi France Dlamini, kwabe sekuthatha